भारत-चीन सीमा विवादका कारकहरू
विपिन देव: रुस-युक्रेनको तनावले युरोप र युरेसीया क्षेत्र आक्रान्त छ । युद्धका बाछिटाहरू विश्व अर्थतन्त्र र भू-राजनीतिलाई प्रभावित गरिरहेका छन् । विभिन्न तनावग्रस्त र बल्झिएका मुद्दाहरू कूटनीतिक रंगमञ्चमा देखिन्छ । कूटनीतिक पहलका साथै सैन्य अभ्यासबाट सामरिक क्षमता देखाउने कार्य पनि शक्ति केन्द्रहरूबाट भइरहेको छ । आउने दिनमा संसारको तनाव वा द्वन्द ट्रान्स एयटलान्टिक (यूरोप र […]
भारत–चीन सीमा क्षेत्रमा आरोप प्रत्यारोप
तीन वर्षदेखि हिमालय क्षेत्रमा भारत र चीनबीच तनाव साम्य भएको छैन। हालै गलवान उपत्यकामा चिनियाँ झण्डा देखिएपछि भारत झस्किएको छ। उसले प्याङ्गोङ सो क्षेत्रमा चीनले पुलसहितका संरचना बनाइरहेको भन्दै त्यसलाई...
सीमा विवाद भइरहँदा पनि चीन र भारतबीच अहिलेसम्मकै धेरै व्यापार, भारतको घाटा उच्च !
सीमा विवाद चल्दाचल्दै भारत र चीन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एकजुट !
सीमा क्षेत्रको विवादका कारण भारत र चीनबीच समय–समयमा तनाव उत्पन्न हुन्छ । तनाव अझै समाधान भइसकेको छैन । तर स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु वार्ता सम्मेलनमा भारत र चीन एकजुट देखिएका छन् । वार्तामा कोइलाको प्रयोग रोक्ने प्रस्तावलाई भारत र चीन मिलेर असफल पारेका छन् । बैठकमा कोइलाको प्रयोग पूर्णतः बन्द गर्ने प्रस्ताव आएको थियो तर भारत र चीन मिलेर कोइलाको प्रयोग घटाउँदै जाने प्रस्ताव पारित गराएका छन् । यसले गर्दा कोइलाको प्रयोग पूर्णतः बन्द हुने छैन । कोइलाको प्रयोग ‘फेज आउट&rsqu...
भारतलाई थाहै नदिइ भुटानले गर्यो चीनसँग सीमा विवाद सुल्झाउने सहमति
काठमाडौँ – भारतको उपस्थित विनै चीन र भुटानले सीमा विवाद समाधान गर्ने सहमित गरेका छन्। अहिलेसम्म भुटानको विदेश र सैन्य नीति भारत नियन्त्रित मानिँदै आएको अवस्थामा भुटानले भारतलाई ‘बाइपास’ गरेर सीमा विवाद सुल्झाउने सहमति गरेको हो। चीन र भुटानले सीमा विवाद समाधानकालाई तीन चरणको ‘रोडम्याम’ सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै भारतले चनाखो हुँदै ‘सर्तकात्मक प्रतिक्रिया’ […]
बेइजिङ, १ कार्तिक : चीन र भारतले यही हिउँददेखि विवादित सीमामा थप सेना खटाउने भएका छन्। दुई देशबीच यसै हप्ता भएको १३ औं पटकको सैन्य बैठक असफल भएपछि दुवै पक्षले विवादित सीमामा थप सेना खटाउने भएका हुन्। गएको आइतबार भारत र चिनियाँ सेनाबीच १३ औं पटकको कमान्डर स्तरीय सैन्य बैठक बसेको थियो। विवादित सीमा समस्या […]
भारत-चीन वार्ता असफल भएपछि युद्धको कालो बादल
एजेन्सी, २५ असोज । भारत र चीनबीच सीमा विवाद अन्त गर्न भएको वार्ता असफल भएको छ । दुई देशबीच सैन्य तहमा भएको वार्ता असफल भएको हो । १७ महिना अघि सैनिक मारिने गरी झडप भएपछि सीमा विवाद अन्त गर्न वार्ता चलेपनि अन्तमा असफल भएको हो । अब दुई देशले लद्दाखको हिमाली क्षेत्रमा सैनिक पछाडि नहटाउने […]
काठमाण्डाै - लद्दाख सीमा विवादबारे भारत र चीनबीच उच्चस्तरीय वार्ता हुँदैछ । चीन र भारतबीच लद्दाखमा सीमा क्षेत्रको विवाद कायमै रहेको छ । विवाद अन्त्य गरी लद्दाखमा शान्ति स्थापनाका लागि आज दुई देशबीच उच्चस्तरीय वार्ता हुन लागेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । दुई पक्षबीच हुन लागेको यो १३ औं वार्ता हो । पछिल्लो समय भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र चिनियाँ समकक्षी वाङ्ग यी बीच द्धिपक्षीय वार्ता भएको थियो । भारतले लद्दाखमा तैनाथ चिनियाँ सैनिक फिर्ता गर्न चीनलाई आग्रह गर्दै आएको छ । आजको वार्तामा पनि चीनलाई सेना फिर्ताका लाग...
'चीन र भारत मित्र र साझेदार हुन्, शत्रु र विरोधीहरू होइनन्'
चीन र भारतबीच कतिपय स्थानमा विगतदेखि नै सीमा विवाद जारी रहेको भन्दै यसलाई समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने चिनियाँ अधिकारीले बताएका छन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भने, “अहिलेको मुख्य विषय कसरी विश्वका दुई ठूला विकासोन्मुख देशहरू एक भएर बस्न र विकास गर्न सक्छन् तथा कसरी सँगसँगै पुनरूत्थान हुनसक्छन् भन्ने हो ।” उनले भने, “प्राचीन सभ्यतासहित दुई छिमेकी मुलुक र विश्वमा एक अर्ब जनसङ्ख्या भएका दुई उदीयमान अर्थतन्त्रका रूपमा चीन र भारतको साझा रुचि र सहयोगको ठूलो सम्भावना रहेको छ । त्यसैले चीन र भारत...
भारत–चीन सीमा विवाद : पूर्वी लद्दाखमा सम्झौता
काठमाण्डाै – भारत र चीनबीच विवादित सीमा क्षेत्र लद्दाखलाई लिएर सम्झौता भएको छ । भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले बिहीवार पूर्वी लद्दाखको वर्तमान स्थितिबारे संसदलाई जानकारी गराउनुभएकाे छ । उहाँले भन्नुभएको छ, ‘चीनसँग प्याङगोङ तालको उत्तर र दक्षिण क्षेत्रमा सेनालाई पछि हटाउने सहमति भएको छ । हाम्रो दृढ सङ्कल्प र अर्थपूर्ण वार्ताका कारण चीनसँग सहमति भएको हो, सदनलाई यो कुरा भनिरहँदा निकै खुसी लागेको छ ।’पूर्वी लद्दाखमा भारत र चीन सीमा (वास्तविक नियन्त्रण रेखा ‘एलओसी’) मा दुई देशबीच झण्...